Raha tia mijery sariitatra mampiseho dia ho tena tia mampihomehy Donald Gana miaraka amin'ny fomba fijery sy ny feo. Scruffy Gana dia dimy reels slots lalao, miorina amin'ny fianakaviana ny sariitatra ganagana. Afaka milalao izany slots tombony toerana tsara indrindra lalao sy ny 25 raikitra paylines. Ny entin'ny ity lalao ity farihy animation amin'ny lota voninkazo sy ny sahona eo amin'ny ravina. Ny fomba sariitatra mozika eo aoriana ianao foana foana nampiantrano. Misy ny sasany tena mampihomehy anjara toy ny lalao fanehoana an'ohatra izay hametraka ny singa mahafinaritra ho an'ny reels. Ny Betting fetra ao ity lalao ity teo amin'ny kely indrindra ny 25p sy Max no £ 250 isan-kofehy ireny.
Momba ny developer ny Scruffy Gana
Fomba mahafinaritra ity sariitatra fa afaka milalao eo amin'ny slots tombony toerana tsara indrindra dia novokarin'ny NetEnt. A marika anarana malaza ao amin'ny filokana orinasa an-jatony ny Casino Lalao noforonina ho an'ny mpampiasa aterineto.
Ao amin'io sariitatra mahatsikaiky mifototra slot lalao, dia afaka mahita ny sary famantarana ny fianakaviana ny ganagana. Ny lehilahy raharaham-barotra ny olona gana, mpikarakara tokantrano gana, ny teenaged gana sy ny zandriny, tanora gana. Milalao karatra in tapaka atody akorandriaka no fanehoana an'ohatra ny vidiny ambany ity lalao ity fa afaka hilalao amin'ny slots tombony toerana tsara indrindra. Ny lehilahy gana mandoa ny ambony amin'ny 400 fotoana tamin'ny dimy ny karazany avy amin'ny payline. Misy tombony roa marika eo amin'ny lalao sy ny ratsy tarehy fa zava-duckling ary ny iray hafa tombony mariky.
Wild Bonus: Ny ratsy tarehy marika duckling anaty ala no endri-javatra io lalao ary mandrakotra ho an'ny rehetra ny olon-kafa. Rehefa hita ao amin'ny mandresy mitambatra, ny marika maniry ny lava tsanganana sady tsara tarehy gana mba handrakotra ny miraingiraingy azon'ny manontolo. Noho izany dia afaka manantena ireo Fandresena lehibe amin'ny bibidia kokoa marika. Nandritra maimaim-poana spins, an'ala miseho toy ny fanitarana an'ala, tsy tapaka sy ny bibidia goavam bibidia izay afaka handrakotra telo reels manontolo.
ampielezo Feature: Misy famantarana amin'ny Free Spins voalaza teo amboniny ary aelezo ny endri-javatra. Ankehitriny rehefa fantatrao izany no, tokony ho fantatrao ny fomba no. Rehefa milalao slot ity eo amin'ny slots tombony toerana tsara indrindra, dia hahatsikaritra telo aelezo fanehoana an'ohatra hamaha tombony endri-javatra sasany. Mety loka misy lafin-javatra dimy izay maimaim-poana ihany koa dia ahitana spins amin'ny enina ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo.
Rehefa milalao ity lalao ity ny slots tombony toerana tsara indrindra, dia hiaina mahafinaritra isan-karazany miaraka amin'ny tombony Fandresena.